Di na nwunye na-agbapụ iche iche Dutch ọhụrụ ejidere n'ụgbọ elu na-aga Spain
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands » Di na nwunye na-agbapụ iche iche Dutch ọhụrụ ejidere n'ụgbọ elu na-aga Spain
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Netherlands nọ na nche ka achọpụtara ihe karịrị iri na abụọ nke ụdị Omicron COVID-19 ọhụrụ n'etiti ndị njem ụgbọ elu - tupu mba iri abụọ na asaa EU ekwenyeghị machibido njem si mba asaa ndịda Africa na Fraịde.
Ihe omume dị egwu mere na Amsterdam's Airportgbọ elu Schiphol nọ n'ụgbọ elu ekwesịrị ịpụ na Spain n'ihe dịka elekere isii nke abalị ụbọchị ụka.
Ka ụgbọ elu ahụ na-achọ ịpụ, ndị uwe ojii Dutch banyere ụgbọ elu wee wepụ otu di na nwunye gbapụrụ n'ụlọ nkwari akụ iche maka ndị a na-enyo enyo na ndị na-ebu COVID-19 Omicron na Netherlands.
A tọhapụrụ aha ndị di na nwunye ahụ ejidere, na amabeghị ma ha bu ọrịa ma ọ bụ na a kpọchiri ha naanị maka ịkpachara anya. Ndị agha ahụ nyefere ha n'aka ndị ọrụ ahụike ka e ziga ha n'ebe a na-adọpụ iche.
Mba netherland nọ na nche dị elu mgbe achọpụtara ihe karịrị ikpe iri na abụọ nke ụdị Omicron COVID-19 ọhụrụ n'etiti ndị njem ụgbọ elu - tupu mba iri abụọ na asaa EU ekwenyela machibido njem site na mba asaa ndịda Africa na Fraịde.
Ndị niile si South Africa bịarutere na Netherlands nso nso a, yana Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini, Namibia, Mozambique na Zimbabwe, ka achọrọ ka a nwalee ma kewapụ ya iche ruo mgbe amara nsonaazụ ha, ọbụlagodi na agbanyere ha ọgwụ.
Ihe dị ka mmadụ 61 n'ime ngụkọta nke ndị njem 624 nwalere ihe dị mma maka COVID-19, yabụ Dutch National Institute for Health (RIVM) dọrọ aka ná ntị na "nwere ike ịhụ ụdị ọhụrụ a na nlele ule ọzọ."
"Anyị ga-achịkwa ma ha na-agbaso iwu ndị ahụ," Minista ahụike Dutch Hugo de Jonge kwuru na Sọnde, awa ole na ole tupu mbọ mgbapụ ahụ.